Dad Badan Oo Cudurka Shuban Biyoodka Ugu Geeriyooday Baydhabo. – Calamada.com
Dad Badan Oo Cudurka Shuban Biyoodka Ugu Geeriyooday Baydhabo.
calamada January 15, 2017 2 min read
Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in cudurka shubanka uu ku dilay boqolaal qof oo isugu jiro carruur iyo dad waaweyn.
Sida ay xaqiijiyeen ilaha caafimaadka magaalada Baydhabo maalmihii khamiista iyo jimcaha wuxuu cudurka shubanka ku dilay magaaladaasi 35 qof oo carruur u badan.
Habeenkii Khamiista soo galaysay 7 qof oo dhammaantood ahaa dad qaangaar ah ayuu cudurku ku dilay xaafadda Mursal halka islama maalintii khamiista uu 20 qof ku dilay xaafadda ADC-da, sidoo kale xaafado kaabiga ku haaya isbitaalka weyn waxaa ku dhintay 8 qof.
Â Wararka ayaa intaasi ku daraya in dhimashada ugu daran ay maalintii Jimcaha ka dhacday xaafadaha ku dhow isbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo.
Boqolaal qof oo cudurka shubanka uu soo ritay ayaa jiifa isbitaallada magaalada Baydhabo iyadoona uu buux dhaafsamay isbitaalka weyn ee magaalada.
Warar lagu kalsoonyahay waxay sheegayaan in cudurka daacuun caloolaha uu soo bilaawday wixii ka dambeeyay bishii December 2016 wuxuuna gallaaftay nolosha tobaneeyo qof halka boqolaal kale ay il daranyihiin.
Tirakoob hordhac ah oo la sameeyay ayaa sheegaya in ugu yaraan 130 qof ay celcelis ahaan cudurka u dhinteen balse wali waxaa socda la tacaalidda dadka uu soo ritay cudurkani sida ay sheegeen ilaha caafimaadka Baydhabo Jannaay.
Dhaqaatiirta caafimaadka ayaa sheegay in ceelasha biyaha oo biya yareeyay ay sabab u yihiin in cudurku dilaaco, tusaale ahaan xaafado katirsan magaalada dadka deggan waxay cabaan biyo lagu dhaamiyay kareetooyin (Gaari dameerro), biyahaas waxaa laga dhaamiyay ceelal gaa-gaaban oo laga dhax qoday isha Baydhabo.
Bahda caafimaadka Baydhabo ayaa ka digay in cudurku sii baaho waxayna kula taliyeen shacabka in ay isticmaalaan biya nadiif ah ayna ka fogaadaan biyaha laga keeno ceelasha aan sida hagaagsan uqodnayn.
Waa dhimashadii ugu badneed ee Cudurka shubanka uu ka geysto magaalada Baydhabo toban sano gudahood.
Previous: Qof Shacab Ah Oo Lagu Dilay Magaalada Muqdisho.
Next: Faahfaahin Laga Helayo Maleeshiyaatka Ku Wada Dagaalamay Jowhar.